2KB သတင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်သင်သည် WhatsApp ကိုချိုးဖျက်နိုင်သည် Androidsis
Francisco Ruiz | | Android application များ, လုံခွုံရေး, Whatsapp
WhatsApp သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံး download လုပ်ပြီးအသုံးပြုသောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူသန်း ၆၀၀ ကျော်ကထောက်ခံသည်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့အားလုံးအနက်အလုံခြုံဆုံးဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒေတာလုံခြုံရေးနှင့် encryption ကို, ကံမကောင်းစွာတပ်မက်လိုချင်သောအရာအများကြီးအရွက်.
နောက်ဥပမာတစ်ခု WhatsApp ၌လုံခြုံမှုမရှိခြင်းအထူးသဖြင့် 2000KB သာအက္ခရာ ၂၀၀၀ ခန့်ပါသည့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ရုံဖြင့်လျှောက်လွှာကိုဖျက်စီးနိုင်ပြီးပိတ်ပစ်ခြင်း၊ ဒေတာများကိုဖျက်သိမ်းသည်အထိပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောအိန္ဒိယမူရင်းလုံခြုံရေးကျောင်းသားအချို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်။ အဆိုပါထိခိုက် chat သို့မဟုတ်စကားပြောဆိုမှု။
အထူးသဖြင့်၎င်းလိုင်းများအထက်ရှိပူးတွဲပါဗွီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်မှာ - Indarjeet ဘူယန် y Saurav Karအိန္ဒိယမှလုံခြုံရေးကျောင်းသားနှစ် ဦး သည်၎င်းကိုရှာတွေ့လိမ့်မည် WhatsApp ကိုလုံခြုံရေးအတွက်ပျက်ကွက်သို့မဟုတ်အားနည်းချက်။ တရုတ်အက္ခရာ၏အက္ခရာများသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောသင်္ကေတများကဲ့သို့သောစာတိုများဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုတည်းကိုသာပို့ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည် WhatsApp application ကိုချိုး ဖျက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်မလုပ်မချင်းပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်မည်မဟုတ် ထိခိုက်နစ်နာသော chat data ကိုဖျက်ပါ ရုံကနေမက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံရရှိဘို့ 2KB စုစုပေါင်းအလေးချိန်။
ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုသည်ယခင်ကအောင်မြင်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့အတွက်အထူးအလေးအနက်ထားပုံရသည် အလေးချိန်7Mb ခန့်စူပါစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို.
ယခုအချိန်တွင် WhatsApp မှတရား ၀ င်ထုတ်ပြန်ချက်အချို့ကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ မည်သူမဆိုအသုံးချနိုင်သောလုံခြုံရေးအားနည်းချက် အထူးသင်္ကေတများပါသောမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းနှင့်အလေးချိန် 2KB နှင့်အထက်ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါတရားဝင်ကြေငြာချက် (သို့) ဒီပြင်းထန်သောလုံခြုံရေးအားနည်းချက်ကိုဖြေရှင်းပေးသောနောက်ဆုံးသတင်းများကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းအားဖြင့်၊ အကယ်လို့ဒီတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့ရင်၊ WhatsApp ကိုလက်ခံရရှိသည်ငါဆိုသည်ကား၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောပေါက်ကွဲစေနိုင်သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုကျွန်ုပ်တို့အားပို့ပေးသူနှင့်စကားပြောခန်းတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်စကားဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ခြင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » 2KB သာမက်ဆေ့ခ်ျသည် WhatsApp ကိုချိုးဖျက်နိုင်သည်
၎င်းသည် IOS တွင်မဟုတ်ဘဲ Android တွင်သာဖြစ်ပျက်ကြောင်းရှင်းလင်းပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအုပ်စုတစ်ခုထဲတွင်ပို့ပါကသင်ထွက်ခွာရမည်ဆိုပါကသင့်တွင်အိုင်ဖုန်းရှိသူတစ်စုံတစ်ယောက်အားထပ်မံထည့်သွင်းရန်ပြောပါ။
ငါ ios ၏တည်ငြိမ်မှုကိုပို။ ပို။ လွဲချော် ... ငါနှစ်လသာ android အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
iphone အတွက်ငါပုံဆွဲ။ အက်ပရာမှဆွဲထားသောစာလုံးအချို့၏စူပါမက်ဆေ့ခ်ျပို့သည်
သူငယ်ချင်း… tennis iphone 5S 64 GB …… ..more info ကျွန်မအီးမေးလ်ကိုထားခဲ့တယ် jheyson.jbk@gmail.com
Android လှည့်ကွက်: ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံး application များကို Google Play စတိုးမှတိုက်ရိုက် Download လုပ်ရန်